Galka Baarista - VOA
Talaado 5 July 2022
Galka Baarista: Falanqeyn ku saabsan heshiiskii qeybsiga shidaalka ee dowladda iyo maamul goboleedyada
Barnaamijkii Galka Baarista oo ku saabsan qaybtii u dambaysay ee taxanaha soo saarista shidaalka Soomaaliya waxaan toddobaadkan ku eegeynaa heshiis aan wax badan la falanqen faa'iidadiisa iyo dhaliisha, kaas oo ay wada saxiixdeen dowladda Federalka iyo Maamul Goboleedyada bishii June 2018.
Galka Baarista: Taariikhda shidaalka Soomaaliya
Barnaamijka Galka Baarista ee toddobaadkan qeybtiisa kowaad waxa uu ku saabsan yahay taariikhda shidaalka Soomaaliya, waxana soo diyaariyay soona jeedinaya Harun Maruf.
Galka Baarista: Sida ay u dhacday codeyntii doorashada madaxweynaha
Barnaamijka Galka Baarista waxa uu maanta ku saabsan yahay doorashadii madaxweynaha ee dhacday 15-kii May 2022 ee uu ku guuleystay Xasan Sheekh Maxamuud.
Galka Baarista: Faah-faahin dheeri ah oo ku saabsan heshiiska shidaalka
Barnaamijka Galka Baarista waxa uu toddobaadkan ku saabsan yahay xog dheeri ah oo barnaamijka uu ka helay heshiiska muranka dhaliyey ee ay galeen wasiirka batroolka Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed iyo madaxa shirkadda Coastline Exporations Richard Anderson.
Shirkadda Coastline Exploration ayaa ku gacansayrtay go'aankii ay dowladda Soomaaliya ku baabi'isay heshiiskii shidaalka labada dhinac, waxayna sheegtay in heshiiska uu yahay mid sharci ah, ayna ka rajo-qabaan in loo fasaxo kadib baaritaanka xeer ilaaliyaha guud ee qaranka.
Galka Baarista: Dadaallada ay Soomaaliya uga baxeyso heshiiskii shidaalka ee muranka dhaliyey
Barnaamijkii Galka Baarista waxa uu toddobaadkan ku saabsan heshiiska ay gashay Wasaaradda Batroolka Soomaaliya, kaasi oo ay ka horyimaadeen xafiisyada madaxweynaha iyo ra’iisul wasaaraha Soomaaliya.
Galka Baarista: Xeeladda cusub ee qaraxyada Al-Shabaab
Barnaamijkii Galka Baarista waxa uu toddobaadkan ku saabsan yahay isbeddelada dhowaan ku yimid habka ay qaraxyada u fuliyaan maleeshiyada ururka Al-Shabaab.
Galka Baarista: Hanaanka Caafimaadka Soomaaliya
Barnaamijka Galka Baarista waxa uu todobaadkan ku saabsan yahay hanaanka caafimaadka Soomaaliya, ayada oo dhowaan lasoo geba-gebeeyey shirkii cilmi-baarista caafimaadka Soomaaliya.
Galka Baarista: Hal-abuur caafimaad oo lagu badbaadinayo carruurta Soomaaliya
Galka Baarista: Maxkamadda militariga awood sharci ma u leedahay qaadista kiisaska Al-Shabaab?
Barnaamijka Galka Baarista ee toddobaadkan wuxuu ku saabsan yahay shaqada maxkamadda militariga Soomaaliya. Waxaa soo diyaariyay, soona jeedinaya Harun Macruf.
Galka Baarista: Khubaro ku baaqday dib u eegista amniga Soomaaliya
Khilaafka madaxda dowladda Somaaliyaa ayaa mar kale keenay cabsi laga qabo inay kala qeybsamaan ha'adaha dowladda, sida kuwa fulinta iyo laamaha amniga, ayna horseeddo colaad la mid ah tii bishii April ee sanadkan ka dhacday magaalada Muqdisho.